Noloshii Kofi Annan: Madaxii QM iyo ku guulaystihii jaa'isadda Nobel - BBC News Somali
Noloshii Kofi Annan: Madaxii QM iyo ku guulaystihii jaa'isadda Nobel
Waxa uu ahaa iskuulkiisa kuleejada ah ee ku yaallay galbeedka Africa meesha uu Kofi Annan - ninka marka dambe noqon doona dublamaasiga ugu sarreeya caalamka - ka bartay mid ka mid ah cashirradiisii ugu muhiimsanaa.
Casharkaas waxa uu ahaa, sida uu goor dambe sheegay "In xanuun kasta oo la dareemo uu khuseeyo dadka oo dhan meel kasta oo ay joogaan".
Howlihii uu ka soo qabtay arrimaha bani'aadannimada waxa ay sahleen in uu ku guuleysto abaal marinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize, balse waxa ay sidoo kale u soo jiideen xoogaa dhaleeceyn ah.
Kofi Annan: Soomaaliya wali waa meel qatar ah
1993 wuxuu Koffi Annan ahaa madaxa arrimaha nabad ilaalinta
Marka la isku keeno magaca hore ee mataanaha oo ah 'Kofi iyo Efua' micnohoodu waa "waxay dhasheen Jimce" oo luuqadda 'Akan' ah, halka magaca dhexe ee 'Atta' oo ay isla wadaagaanna uu micnihiisu yahay "mataano".
Waxa uu ku soo dhex koray qoys maal qabeen ah - awooweyaashiis waxa ay ahaayeen hogaamiyeyaal dhaqameed, halka aabihiisna uu soo noqday barasaab gobol - waxa uuna kusoo barbaaray waddan markaas wali ku jiray gacanta gumeysiga.
Labo maalmood ka hor inta uusan diblamaasiga mustaqbalka galin da'diisa sannadka 19-aad waxa uu dalkiisa qaatay xoriyadda, waxa uuna noqday Ghana.
"Waxaan bannaanka u soo baxay anigoo dhallinyaro ah oo aaminsan in is baddal uu suurta gal yahay, " sidaas ayuu koox ay isla joogeen Canada ku yiri sannadkii 2012-kii.
Booskaas shaqo waxa uu ahaa - mid ka mid ah howl wadeennada dhinaca maaliyadda ee hay'adda caafimaadka adduunka ee (WHO) oo ka tirsan Qaramada Midoobay.
Labadaas dhacdaba waxa uu culeys xooggan ka soo wajahay Annan iyo waaxda uu masuulka ka ahaa ee Qaramada Midoobay - gaar ahaan markii ay soo shaac baxday in waaxdiisa nabad ilaalinta QM ay iska dhega tirtay macluumaad badan oo loo soo gudbiyay, kuwaasoo ka digayay in xasuuq laga maleeyayay Rwanda.
"Aniga qudhayda, maadaama aan wakhtigaas ahaa madaxa howlaha nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay waxaan dalal fara badan u diray ciidamo," ayuu yiri sannadkii 2004-tii. " Waxaan aaminsanaa xilligaas inaan sameynayay waxa ugu fiican".
"Balse waxaan garowsaday xasuuqa ka dib in aan xilligaas qaban karay waxyaabo badan ayna ahayd inaan qabto si aan gacan uga geysto ka hor tagidda xasuuqa. Xasuustaan xanuunka badan oo ay ka mid tahay wixii ka dhacay Bosnia and Herzegovina, waxay saameyn ku yeelatay qaabka aan u fakaro iyo qaar badan oo ka mid ah ficilladeyda, maadaama aan ahay xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay" ayuu yiri.
Annan waxa uu dhaxlay xukunka hay'ad 52 sano ka dib aasaaskeeda uu culeys badan saarnaa, deyn fara badanna lagu lahaa.
"Waxaan dhihi jiray xarfaha SG looma soo gaabiyin xoghayaha-guud ee waxaa loo soo gaabiyay ri'-baxsad ah" ayuu ku yiri BBC-da.
Sannadkii 2001-dii Annan iyo Qaramada Midoobay waxaa la guddoonsiiyay abaar marinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize. Abaal marinta waxaa si toos ah loogu magacaabay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo aad loogu ammaanay dadaallada uu ka sameeyay arrimaha bani'aadannimada.
Kala qeybsanaantaan cusub ee u dhaxeysay Annan iyo Mareykanka waxa ay sababtay in ay dhibaatooyin soo wajahaan isaga, ka dib markii ay soo baxday sannadkii 2004-tii "fadeexadda saliid cunto ku baddalashada" taasoo wiiqday Xoghayaha guud shaqo ahaan iyo shakhsi ahaanba.
Barnaamijka saliidda oo billowday sannadkii 1996-kii ayaa ku qotomay in saliid xaddidan laga iibiyo Ciraaq oo ay cuna qabateyn saarneyd isla markaana loogu baddalo adeegyada bani'aadannimada sida cuntada.
Mareykanka gudihiisa, siyaasiyiin fara badan ayaa ka dalbaday in uu xilka iska casilo. Jawaabtiisu waxa ay ahayd "Maya, lagama yaabo."
Laakiin 18 bilood ka dib, bishii December ee sannadkii 2006-dii, xilka ayuu isaga dagay. Markaas waxa uu ku dhawaa da'da 70 sano.
Isaga iyo xaaskiisa labaad, oo ah qareen u dhalatay Sweden oo lagu magacaabo Nane Marie Lagergren, ayna is guursadeen sannadkii 1984-kii ayaa marki uu xilka iska casilay waxa ay go'aansadeen in ay aadaan dalka Talyaaniga si ay lix isbuuc ugu soo nastaan.
Wargeyska The Guardian, ayaa soo tabiyay in markii uu halkaas hal isbuuc joogayba uu ku caajisay - waxaa ku soo xoomay dad dhallinyaro ah oo doonayay in uu sawirro la galo.
Sannadkii 2007-dii ayuu aasaasay hay'ad uu ku magacaabay Kofi Annan Foundation taasoo uu ugu tala galay in ay ka shaqeyso arrimaha la xiriira horumarka dunida, amniga iyo nabadda.
"Waxaan ogaaday in howl gabnimada ay tahay shaqo adag" ayuu Annan isagoo kaftamaya ku yiri wareysi ay BBC-da la yeelatay markii uu u dabaal dagayay munaasabadda dhalashadiisa 80-aad.